Da Brat anobuda pa Instagram, anounza musikana - Nhau
Kuru Nhau Varaidzo Blog Macelebs
Da Brat anobuda pa Instagram, anounza musikana
Rapper Da Brat abuda sengochani.
Moses Robinson / REX / Shutterstock
Iye akasarudzwa weGrammy akaenda ku Instagram munaKurume 26 kuti agovane vhidhiyo yemanzwiro maanoratidza chipo chekuzvarwa kwekutanga kubva kumusikana wake, Kaleidoscope Hair Products CEO Jesseca 'BB Judy' Dupart.
'Handina kumbobvira ndambova. Hazvina basa kuti nditaure ... ndagara ndiri munhu akazvimiririra kusvikira ndasangana nemutambo wemwoyo wangu anobata zvimwe zvinhu zvakasiyana nezvandinoita ini. Mazvita mwana @darealbbjudy nezvakawanda kupfuura ichi chinoshamisa chipo chekuzvarwa, 'Da Brat akarondedzera vhidhiyo inoratidza yake nyowani Bentley. Handisati ndambonzwa kunzwa uku. Zvinotyisa zvekuti kazhinji ndinozviwana ndiri mumazamu ndichitarisira kuti ndisambonamwa kuti ndione kana zviri zvechokwadi kuti ndigone kurarama muchiroto ichi nekusingaperi. '
Wona ichi chinyorwa pa Instagram
Handina kumbobvira ndambova. Hazvina basa kuti nditaure ... ndagara ndiri munhu akazvimiririra kusvikira ndasangana nemutambo wemwoyo wangu anobata zvimwe zvinhu zvakasiyana nezvandinoita ini. Ndatenda mwana @darealbbjudy nezvakanyanya kupfuura ichi chinoshamisa chipo chekuzvarwa. Handisati ndambonzwa kunzwa uku. Zvinotyisa zvekuti kazhinji ndinozviwana ndiri mumazamu ndichitarisira kuti ndisatombonamwa kuti ndione kana chiri chechokwadi kuti ndigone kurarama muchiroto ichi zvachose. ONA @darealbbjudy peji reZVAKANAKA SURPRISE EVER️ #sosoblessed #twinflame #isthismylife #dontwakemeup #nothinghappensbyaccident
Joseph baena arnold schwarzenegger mwanakomana
Chinyorwa chakagovaniswa na HONGU HAMA (@sosobrat) musi waMar 26, 2020 na6: 14 am PDT
Zuva rapfuura, BB Judy akatumira pikicha ichizviratidza yakakwenenzverwa kuna Da Brat. Akanyora pfuti inotapira ine emoji yemoyo uye izwi rekuti 'yep.'
️ yep… ..
Chinyorwa chakagovaniswa na Jesseca Dupart‍️ (@darealbbjudy) musi waMarch 25, 2020 na7: 43 pm PDT
Mukadzi waDa Brat rudo akataura nezve chipo chakakura, futi.
'Anokodzera PASI uye nezvimwe zvakawanda,' BB Judy akanyora pa Instagram. 'Handina kumbobvira ndakafara SOOOO uye nokutendeseka kufunga kuti hazvisi chete nekuda kwekubatana kwedu asi zvakare nekuti isu tanga tiri isu pachedu.'
Akazodaidza Da Brat, 'Hafu yangu iri nani, wangu zvachose, mapatya angu murazvo.'
will smith mubvunzo chiratidzo meme
Kwete chete kuti Jud Judy naDa Brat vanoita kunge vane hupenyu hune rudo pamwechete, ivo zvakare vane akafanana maBentleys.
HERS • n • HERE
Chinyorwa chakagovaniswa na Jesseca Dupart‍️ (@darealbbjudy) musi waMarch 25, 2020 na7: 58 pm PDT
'YAKE • n • YAKE,' BB Judy akanyora chinyorwa chadzo mumota dzavo.
Sean Hannity akabatana ne'Fox & Shamwari 'inomiririra mushure mekurambana muchivande
Ray J anoda kugadzirisa muchato, mukadzi ane nhumbu achiri kuda kurambana: Rondedzera
caitlyn jenner kudzokera pakuva murume
sally jesse raphael aripi iye zvino
mariah carey anopisa rokwe remuchato
john cena anotsemuka na nikki bella
sandra nzombe muhukama